Asusu Igbo: Imo APC Primaries: Ụwa gbara onye ọbụla gharị - ENTER NIGERIA
Asusu Igbo: Imo APC Primaries: Ụwa gbara onye ọbụla gharị
Echi bụ ụbọchị ikpeazụ INEC wepụtara maka ịnye ha aha ndị ga-ebụ ọkọrọtọ ndị pati nịịle nọ na Naịjịrịa bụ ndị ga-anọchite anya ha na ndọrọndọrọ ọchịchị 2019 dịka gọvano maọbụ ndi ọmeiwu.
Ka ọ dị ugbua onwebeghị onye ma ihe echi ga-eweta n’APC Imo steeti dịka ihe siri kwuru.
Ikpe ka dị n’ụlọikpe na etiti Uche Nwosu na Hope Uzodinma maka onye ga-ebutere APC ọkọrọtọ gọvanọ n’Imo steeti.
Chetakwa n’ụlọikpe yighariri ụbọchị ya bụ Ikpe mgbe amaghị ama, dịka ndị otu Rochas Okorocha na-arịọ ụlọikpe ukwu n’Abuja nke Justice Ishaq bello nọ n’isi ya ka ha kagbuo mkpebi ọkaikpe Othman Musa nke si na ọ bụ Hope Uzodimma meriri ya bụ ntuliaka APC n’Imo steeti.
Nke meburu mbụ bụ na okwu onyeisioche pati nọ n’ọchịchị bụ All Progressives Congress (APC) bụ Adams Oshiomhole kwuru banyere ntuliaka imeụlọ ndị APC mere n’Imo steeti mere ka ọ bụrụ na isi niile ndị mmadụ nyara na ntuliaka imeụlọ nke mbụ bụ n’efu.
Oshiomhole gara n’ihu kwuo na akwukwo abụọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Imo na-ewogharị na soshal media abụghị eziokwu.
Okwu a pụtara na Uche Nwosu, bụ ọgọ aka na-achị Imo steeti Rochas Okorocha, na Hope Uzodimma, bu onye bụ Sineto na-anọchịte anya Orlu zone n’Ụlọ Omeiwu nke Naịjirịa enweghị mmeri dịka ndị nkwado ha kwuru ụnyaahụ.
Cheta na akwụkwọ ndị oke APC nke na-ekweghị na nwepụta Rochas wopụtara Uche Nwosu wepụtara akwụkwọ gosiri na Hope Uzodimma ji vootu 423,895 merie ntuliaka ahụ. Onye binyere aka na ya bụ akwụkwọ bụ onye isi ndị APC bịara nhazi ntuliaka a bụ Ahmed Gulak.
N’aka ọzọ, Onye ode akwụkwọ mgbasa ozi APC n’Imo bụ Jones Onwuasoanya kwuru si na ọ bụ Uche Nwosu merịrị.
Ọ gakwara n’ihu zitere anyị akwụkwọ onye ode akwụkwọ ndị kọmiti a binyere aka. Akwụkwọ a gosiri na Uche Nwosu meriri.
Nke bụ na tupu Oshiomhole jiri kagbuo ntuliaka, mmadu abụọ no ka ndị a sị meriri dịka ndị ga-azọ vootu na afọ 2019 dịka gọvanọ n’okpuru APC n’Imo steeti.
Ọtụtụ mmadu ndị a gbara ajụju ọnụ kwuru na ihe mere ntuliaka jiri dị ọkụ n’Imo ha were kwuo na ọ bụ maka ọtụtụ mmadụ chọrọ ohere ịchị Imo.
N’ime ha, Hope Uzodimma bụ onye Orlu Zone, bụ ebe ọtụtụ ndi chiri Imo na mbụ si. Gọvanọ Okorocha bụkwa onye Orlu zone.
Uche Nwosu bụ onye Umuokwe, Eziama-Obaire n’okpuru ọchịchị Nkwerre, nke sokwa n’ebe akpọro Ọrlụ Senatorial Zone na Bekee. Nke mere ka ọtụtụ mmadu na-ekwu na ebe Okorocha bụ ọgọ ya nwoke, ọ pụtara na ọchịchi ya ga-abu ndọtị nke Okorocha, dika Bekee na-akpọ ‘term’ ọzọ Okorocha nakwa Orlu Zone.
Eze Madumere bụ osote aka na-achị Imo, ma bụkwara otu n’ime ndị na-azọ ọkwa govanọ na steeti ahụ. Madumere bụ onye gburugburu Owere, bu ebe si na ọkwa rụru ha makana kemgbe ọchịchi onye kwuo uche ya nke mpaghara batara n’afọ 1999, ha enwebeghi nwa ha chịri steeti ahụ.
Atụmatụ ya ịzọ ọkwa gọvanọ so n’ihe tisara adụ na mma ya na Okorocha.
Madumere kwuru na ọbụghị makana ya ezughi ịchịta Imo mere Okorocha ejighi akwado ya.
Ndị ọzọ so zọọ ya bụ oche bụchakwa ndị metụtara Okorocha, dịka onye rụrụ ọrụ dịka onye odeakwụkwọ gọọmentị Imo steeti bụ George Etche na ogbo ya n’ọrụ gọọmentị Imo bu Jude Ejiogu.
Chima Anozie, Peter Gbuje, Chris Nzemoka na Chuks Ololo sokwa zọọ ya bụ ohere ịtụrụ ugo APC.
Gịnị mere ụfọdụ ụmụnwoke ji ‘alụ’ nwabebi?
Asusu Igbo : Aga m akwụsị ndị mba ọzọ amụrụ n’Amerịka ị bụ ndị mba anyị – Trump